Adeegsiga Qalabka qalinka ee Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Antonio L. Carter | | Photoshop, dhowr
Qalabka qalinku wuxuu u dhacaa inuu yahay aalad sawir, si kastaba ha noqotee wax badan oo qarsoon ayaa ka dambeeya muuqaalkan fudud, yeelashada kala duwanaansho taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah qalabka ugu caansan ee Photoshop.
Maanta waxaan sii wadi doonnaa inaan ka hadalno qalabka sawirada Adobe Photoshop, iyo gaar ahaan xulashooyinka horumarsan ee qalabka Pen. Waxaan kaaga tagayaa casharka muuqaalka ah, Adeegsiga qalabka qalinka ee ku jira Adobe Photoshop. Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay gelitaanka.
Albaab laga soo galo, Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop, waan aragnay sida loo adeegsado qalabka Qalinka in lagu qoro ama loo sameeyo Line Art. By the way, xirmada buraashyada ee aan ku isticmaalo casharkaas, waad ka soo dejisan kartaa qaybta ugu dambeysa waxayna kuugu adeegi doontaa casharkaan muuqaalka ah iyo sidoo kale in si raaxo leh loo calaamadeeyo mid ka mid ah qalinkaaga qalin. Aan bilowno.
Waxa ugu horeeya waa in la furo dukumiinti ka kooban a qalin ama sawir khad ah oo aan dooneyno inaan ka dhigno lambar.
Waxaan u soconaa isticmaal qalabka burushka oo ay weheliso aaladda qalinka si loogu sawiro sawirkeena.
Waxaan ku abuurnay lakab cusub palette lakabyada.
Iyada oo la xushay qalabka burushka, waxaan tagnaa Gudiga Burushka. Halkaas ayaan ku dooran doonaa Burushka aan ku rinjiyeynayno. Waan qalin jabineynaa.
Waxaan dooranaynaa qalabka qalinka.
Waxaan ku raad raacnaa Qalabka qalinka ee sawirka aan dooneyno inaan khad dhigno.
Marka la raad raaco, waxaan xaq u guji oo liiska qalabka soo baxa, waxaan dooraneynaa dariiqa guud.
Laga soo bilaabo sanduuqa wadahadalka ee muuqda, waxaan dooranaynaa aaladda burushka iyo waxaan u dhaafnay ikhtiyaarka Isku day jilitaanka hubi. Waxaan ku siin Ok.
Waxaan horay u raad raacnay sawirka.
Waxaan xaq u riixnaa oo ka menu qalabka, waxaan dooran Delete Trace.
Waxaan sidoo kale ku raadin karnaa tirooyinka gudahooda sawirro, in lagu dabakho waxyeelooyinka sida Baadhka ama gubashada.
Waa inaan kaliya raad raac halka aan dooneyno in saameynta ay ku socoto oo mar haddii uu jidku xirmo, midig u guji oo dooro Jadwalka Jadwalka.
Laga soo bilaabo sanduuqa wada hadalka ee soo baxa waxaan dooran karnaa saameynta aan rabno inaan codsanno qaabkayaga.
Gudaha barashada fiidiyowga Sharaxaad ballaadhan ayaan ka siinayaa labada shayba.
Salaan la'aan iyo martiqaad inaad iga tagto faallooyinkaaga, codsiyadaada ama soo-jeedintaada iyada oo loo marayo faallooyinka ku jira qoraalkan ama annaga oo u marinay boggayaga Facebook.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Adeegsiga qalabka qalinka ee ku jira Adobe Photoshop